Madaxweynihii hore ee dalka Gambia oo la Maxkamadeynayo | Dhexnimo Media
Home Wararka Madaxweynihii hore ee dalka Gambia oo la Maxkamadeynayo
Dowladda Gambia ayaa sheegtay inay aqbashay talo uu soo jeediyay guddiga runta iyo dib u heshiisiinta, taas oo aheyd in madaxweynihii hore Yahya Jammeh oo hadda dibad-joog ah lagu maxkamadeeyo dilal iyo dembiyo kale oo looga shakisan yahay tan intii uu xaafiiska joogay.
Xeer Ilaaliyaha Guud ee Gambia Dawda Jallow ayaa sheegay in dacwad-ooge gaar ah uu kormeeri doono kiisaska xadgudubyada laga helay xukunkii Jammeh ee 1994 ilaa 2017, kuwaas oo lagu soo bandhigay warbixintii Guddiga Runta, Dib u heshiisiinta iyo Magdhawga (TRRC) ee sanadkii hore.
Guddigan madaxa-banaan ayaa sheegay in Jammeh iyo gacansaarayaashiisa ay mas’uul ka yihiin 44 dambi oo gaar ah oo ka dhan ah saxafiyiinta, askar hore, siyaasiyiin kasoo horjeeda iyo dad rayid ah, oo ay ku jiraan dil iyo kufsi.
Jammeh ayaa talada dalka yar ee Galbeedka Afrika ku qabsaday afgambi sanadkii 1994-tii, waxaana lagu khasbay in uu xilka ka dego kadib markii looga guuleystay doorashadii 2016-kii ee uu ku guuleystay madaxweynaha hadda, Adama Barrow, wuxuuna u cararay waddanka Equatorial Guinea, isagoo dafiray inuu geystay wax dambi ah.
Previous articleMadaxweyne Mustafe Cagjar oo sheegay in maamulkiisa uusan waxba ka qaban karin sicir bararka